Wararka Maanta: Axad, May 8 , 2022-Bulshada ku nool magaalada St. Cloud oo iska aruuriyay lacag dhan 70.000 oo doolar oo qeyb ka ah Gurmadka Suuqa Waaheen
Sheekh Nuux oo ka mid ah Culimada ugu caansan magaalada St. Cloud ayaa uga mahadceliyay bulshadii ka qeyb qaadatay taageerada loo fidanaayo dadkii ku hanti beelay dabkii baaba'shay Suuqa Waaheen, isagoona sheegay in bulshada St. Cloud ay yihiin kuwa mar walba wanaaga jecel oo ka qeyb qaata howlaha gargaarka.
Sheekh Cabdinuur ayaa dhankiisa sheegay in ganacsatadii ku hanti beeshay dabkii Suuqa Waaheen ay ahayeen dad iimaan leh oo kaashaday iimaankooda iyagoo ku khasaaray lacago badan oo gaaraya 500 oo kun, 300 oo kun oo doolar iyo lacago kale.
"Waxyaabaha isoo jiitay waxaa ka mid ahaa in aan arkay ganacsatada muqaalo laga soo duubay ayagoo ku imaansan waxii ku dhacay oo waxaan arkaayay rag iyo dumar leh 500, 300 oo kun oo doolar baa inaga gubatay hadana leh alaxdulilaah, waana wax lagu farxo in dadka imaankoodu uu sareeyo oo ku tuseysa sidey ilaah ugu xiran yihiin" ayuu yiri Sheekh Cabdinuur.
Qaar ka mid ah waxgaradka magaaladaasi oo ayaa kula dardaarmay duqa magaalada Hargeysa inuu si caadalad ah ugu dhiso dadkii ganacsiyadooda uga gubteen Suuaa Waaheen ee magaalada Hargeysa.
Bulshada Soonaaliyeed ee ku kala nool daafaha Caalamka ayaa si dareen leh uga falceliyay Musiibadii ka dhacday Suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa oo dhamaantiis ku basbeelay dab ka dhex kacay suuqaasi, waxaana gurmadyo kala duwan u sameeyay dadkii ku khasaaray suuqaasi Shacabka Soomaaliyeed oo muujiyay isku duubni iyo dowladdo kale oo daneeya arrimaha Soomaaliya.